Tilmaamaha Ganacsiga Apple Mountain Libaax
Sabti, Agoosto 25, 2012 Axad, Agoosto 26, 2012 Douglas Karr
Waxaan ahaa wiil taageere ah ilaa iyo markii uu saaxiibkay Bill ii soo iibsaday Apple TV. Kahor intaadan ogaanin, waxaan haystay guri ay ka buuxaan Macs, ganacsigeyguna hadda waa dhammaan Mac-yada. Imaatinka adduunka PC, waxaa jiray caqabado qaar. Tusaalooyin dhowr ah oo ka baxsan dusha sare ee madaxeyga - macro la'aan Xafiiska, ma leh Microsoft Access. Taasi waa liis aad u yar, in kastoo. Faa'iidooyinka Mac waxay isu beddelayaan inay aad uga badan yihiin faa'iido darrooyinka noqoshada Mac adduunka PC.
Qalabkii ugu dambeeyay iyo softiweerkii, Apple waxay ku waday guryo waxyaabo aan caadi aheyn oo cajiib u ah ganacsi kasta.
Marka hore waa AirPlay. Iyada oo leh Apple TV $ 99 iyo TV kasta oo shaashad weyn leh, xafiiskaagu wuxuu hadda haystaa meel si habsami leh loogu soo bandhigo waxa ku jira laptop-kaaga. Nooca ugu dambeeya ee OSX, Mountain Lion wuxuu ku darayaa badhanka AirPlay ee ku yaal barta menu. Guji oo shaashaddaada ayaa la soo bandhigayaa. Xitaa waad ciyaari kartaa fiidiyow iyo cod!
AirDrop waa next qeyb ka mid ah Mountain Libaaxa La Wadaago Wadaag. Macaamiilkeena, Santuuqa, waxaa yimid si loo saxo feylasha qaar. Halkii aad emayl u diri lahayd ama aad ku ridi lahayd galka daruuraha la wadaago… AirDrop ayaa si fudud loogu oggolaaday inuu faylka si toos ah ugu diro Mac-keyga. AirDrop waxay liis garaynaysaa dhammaan Mac-yada ku hareeraysan waxayna kuu oggolaaneysaa inaad dirto oo aad hesho faylal (oggolaansho). Muuqaal Cajiib ah!
Time Machine waa habka ugu fudud ee keydka abid. Geli a Kaabsol Waqti on your network ama kaliya wadaagaan drive meel… oo aad leedahay meel lagu kaydiyo oo loogu talagalay Time Machine oo si dhib leh u taageeraya aad Mac.
Apple had iyo jeer waxay laheyd qalab aad u wanaagsan oo kaa caawinaya inaad ka haajirto hal Mac oo kan xigta, laakiin Kaaliyaha Socdaalka waa wax fudud oo la yaab leh! Waxaan dhawaan iibsaday MacBook Pro cusub waxaanan u baahday si aan u helo barnaamijyadayda iyo fayladayda. Kordhi badhanka Ikhtiyaariga oo la riixay iyo saaxir fudud ayaa ku weydiinaya haddii aad rabto inaad ka soo celiso Qalabka Mashiinka, dib u rakib Mountain Libaax cusub, ama ka nuqul faylashaada iyo barnaamijyadaada Mac kale. Saacad gudahood waan kacay oo waan ordayay!
Maskaxda ku hay in midkoodna qaababka shabakadani dhab ahaantii u baahan yihiin maamule shabakadeed iyo qaabeyn adag. Sida ugu badan wax kasta oo Apple soo saarto, way shaqeeyaan.
Agoosto 27, 2012 saacaddu markay ahayd 4:55 PM
Markaad "tagto Mac", dib uma noqon kartid! 😉
Patrick Chen oo jooga Marketo
Excel… waa sababta kaliya ee tikniyoolajiyad kasta oo suuqgeyn u adeegsaneysa PC, oo uusan u isticmaalin Mac.
Sep 13, 2012 at 4: 59 PM
Excel waxay umuuqataa inay si tartiib tartiib ah ugu shaqeyneyso Macs-kii hore, laakiin waxay kusii shidan tahay barnaamijkeyga cusub ee 'MacBook Pro'. Faa’iido darrada jirta ayaa ah in VBA iyo Macros aysan ku shaqeynin Mac (illaa aad ku maamusho mooyee Windows… oo ay suuragal tahay, laakiin ay jabinayso ujeeddada loo leeyahay Mac-da!).
EXcel wuxuu ku shaqeeyaa Mac-da sidoo kale lambarada (Mac version of excel). Nambarada WIth ee aad dhoofin kartid oo aad tafatiri kartid waraaqo tayo sare leh oo aad ku keydin kartid qaab heer sare ah. Si fudud!
Sep 2, 2012 at 5: 19 PM
Run @ twitter-15194414: disqus, laakiin nasiib daro nooca Excel ee Mac kuma jiro VBA (Visual Basic for Applications) ama Macros… taasi waa farqi weyn oo dhanka shaqada ah!
Nidaamka kumbuyuutarka ee casriga ah, ee dhexdhexaadku caan ku yahay ayaa leh barnaamij-xaashiyeed oo ku habboon Excel oo la heli karo. Adduun yaab leh ayaa qabta carnival saddex maalmood dabaaldeg ah.
Warar kale, cirku waa buluug, biyuhu waa qoyan yihiin.
Waxaan haystay culeys / dheelitirid / keydinta xaashiyaha isweydaarsiga ee 90s-spec PILM PILOT iyo bartamihii noughties PHbian-based PHONE naxariis dartiis.
Ahhh… aan dhahno kuma qanacsana waxbadan halkan.
Airdrop waxay u egtahay cadaab aad u tiro badan sida astaamaha wadaagista faylalka ee lagu dhisay Microsoft Windows muddo ka yar labaatan sano, iyo inaan si joogto ah ugu isticmaalno xafiiskayaga Windows XP / 7 ee ku saleysan. Dhibaato ayaan kala kulmayaa inaan u arko inay tahay USP-ka Mac-da. Xitaa haddii taasi aysan jirin, way fududaan lahayd in wax la mid ah la sameeyo iyadoo $ 10 bluetooth dongle lagu xirayo dekedda USB-ga ee miiska, iyo dhismayaasha 'BT' (iyo kuwa aan caddayn) ee asalka u ah laptop kasta oo PC ah (Xaqiiqdii, waa wax aan si weyn u adeegsaday si aan ugu diro feylal ama uga diro taleefan leh Bluetooth laakiin isku xirnaanta USB oo liidata, oo ay la socdaan laptop-yada iyo miisaska qalabaysan ee dongle) shayga xusuusta ama kaarka SD.
Airplay… Hagaag, ma xuma, laakiin waxaad wali u baahan tahay martida loo qabo in TV-ga Apple la sameeyo oo la isku xiro. Waxay u badan tahay inaysan ahayn wax aad u adag in wax la mid ah wixii PC / laptop / qashin ah oo duug ah oo ku xiran HDTV-ga VGA-ga lagu daro muuqaalka Wadaagista Miisaanka fog (sidoo kale waxaa lagu dhisay Windows illaa ugu yaraan 2K, haddii uusan ahayn 9x)… iyo xafiis xafiis oo aan awoodo ' U fiirso inay jiraan HDTVyo aad u tiro badan oo ku saabsan taas oo aan haysan nus PC-ga ganacsiga wanaagsan (ama runtii u heellan Mac) oo isku xidhan, ama mashiin Windows ah oo gundhig lagu dhisay (marka laga hadlayo guddiyada calaamadaha dhijitaalka ah). Waxa kale oo jira aaladaha iftiiminta muujinta wireless-ka ee loo heli karo kombiyuutarada - dhab ahaantii, qalab kasta oo dhigaya aaladda VGA, RGB ama YCbCr hi-def (iyo mararka qaarkood HDMI / DVI, ama isku dhafan) iyadoon loo eegin nooca, nidaamka qalliinka, darawalada ama software - lacag aan badnayn. TV-yada casriga ah ee casriga ah waxay u badan tahay inay wax ku qaban karaan khadadkaas iyaga oo adeegsanaya ethernet (sidaas darteedna wifi) sidoo kale, laakiin waqtigan ma doonayo inaan wax lacag ah dul dhigo…
Waqtiga Kaabsalka… Ma doonayo inaan si adag u dhex galo, laakiin marwalba wey ila muuqataa aniga. Waxaan soo iibsaday saxannada adag ee dibadda ka hor taas oo la socota barnaamij aad u eg oo otomaatig ah, waana sharad haddii aan soo iibsaday aaladda guud ee NAS ay si isku mid ah u qaban karto. Noocyada casriga ah ee isku xira daaqadaha ayaa loo dejin karaa inay keydiyaan noocyadi hore ee faylalka ee ku keydsanaa server-ka keydinta ee loogu talagalay kuwa "oops" daqiiqadaha la mid ah sida ay u awoodaan TC (xaqiiqdii… runtii ma ka soo saari kartaa hal faylal ah?) Waxaan khibrad toos ah u lahaa inaad dib u rogto kombiyuutarka oo dhan…) - haddana mar labaad, waxaan ku isticmaalay xaruntaas mashiinkeyga goobta shaqadayda ka dib qalad taxaddar la'aan ah, runtiina waxay ahayd mid aan xaddidnayn… midig u guji galka su'aasha laga qabo, go ilaa "noocyadii hore" tab, oo waxay leeyihiin kaftan ilaa mid ka kooban faylkii la waayey la helo copy ka dib nuqul nuqul faylka ku jira nooca faylka hadda ku jira.
Kaaliyaha Socdaalka - Hagaag, dhibic ayaad ku heysaa halkaas. Waan jeclaan lahaa taas kombuyuutaradayda (sida ay tahay, runti ma ahan wax xanuun weyn in la xiro waddo dibedda ah, nuqul ka sameyso qaddar yar oo dukumiintiyo ah iyo faylal kale oo xog ah oo ku nool diskiga gudaha illaa kan cusub mashiinka (ama xitaa uun ku ridi xoogaa yar oo DVD ah), ka dib dib u rakib barnaamijyada yar ee aan wali adeegsanayo oo ka mid ah tiradii tirada badnayd ee lagu rakibay sannadihii ka dibna si tartiib tartiib ah loo illaaway). Laakiin taasi waxay noqon doontaa mid aad ugu habboon isticmaalaha guriga ama qof xafiis yar oo si caddaalad ah u nidaamsan marka loo eego nooc kasta oo ganacsi ah oo mug leh oo leh shabakaddiisa iyo xafiisyadeeda, halkaas oo sysadmin kasta oo ku habboon milixdooda ay la shaqeyn doonaan nidaamyada hawlgalka ee nidaamsan. sikastaba.
Xaqiiqdii ma waxtarbaa in kuwani ay baabi'iyaan maamule shabakadeed iyo nooc kasta oo edab nidaamsan ama urur shabakadda xafiiskaaga ah? Fowdada noocaas ah waxay u eg tahay mid horseedda caajis, la'aanta awoodda ka soo kabashada masiibada, amni-darrada iyo marinka dalabka, iyada oo aan run ahaantii waxba lagu soo kordhin wax soo saar.
Sep 13, 2012 at 5: 01 PM
Airdrop way ka duwan tahay galka / faylka la wadaago kombuyuutarka. Tani uma baahna shabakad… kaliya Mac kale oo ka dhexjirta fiilada wireless-ka. Waa wax fiican! Waqti kasta oo aan sameeyo faylasha la wadaago kombuyuutarka, waa inaan ka helaa isticmaalaha shabakadda shirkadaha oo aan ku darsadaa kooxdooda ka hor intaanan wax la wadaagin.
maqnaanshaha calaamadda dhibcaha. Waxay kaliya si fudud u shaqeeyaan, ma Mudanayaasha, guddi ay gacanta ku (marka laga reebo rukhsadaha). Waxaan ahaa nin pc ah 20 sano ka dib markaan sys admin ka ahaa shaqada kadibna guriga imid si aan u noqdo sys admin HW guriga, waan daalay. Lacagta ku bixiyay macs oo dib uma eegin. Looma baahna buluug, casaan, cadaan ama madow. Macs waxay si fudud u shaqeeyaan w / o xirfad maamul kasta oo loo baahan yahay. Shaqada waxaan helnay ikhtiyaarka ah inaan dalbanno Mac ama PC. Aniguna waxaan la raacay mac, maxaa yeelay marwalba waan ku ordi karaa daaqadaha VMware dhexdooda. PC-gu wuu baxayaa maxaa yeelay HW jsut wuxuu si fudud ugu baahan yahay inuu shaqeeyo w / o isagoo BS ku leh CS.
Hagaag, daaqadaha waxay ku shaqeeyaan Mac si dhakhso leh ayey u shaqeeyaan, way jilicsan yihiin waxayna sameeyaan waxaad rabto oo ka fiican PC-ga. Marka taas iyada oo maskaxda lagu hayo iyo waxa uu Mac ka qaban karo wax ka fiican kombuyuutarka, maxaa diidaya in labada adduunba ay ku yeeshaan mashiin ka fiican. Aakhirka waxaad ka heli doontaa inaad u isticmaasho qaybta PC-ga yar iyo ka yar.
Airplay sidoo kale wax weyn ma aha. Kumbuyuutarkeyga 5-jirka ah ee PC-ga ah wuxuu ufiirin karaa dhammaan faylalka keydkeyga ee warbaahinta '4 sano jir ah' Sony Network Player '. Hamaansan.
May 12, 2013 at 12: 22 AM
Xaqiiqdi waa sax.
May 23, 2013 at 1: 37 AM
Tani waxay umuuqataa 'wiil taageere ah' oo weyn ilaa Apple. Laakiin waxaa jira waxyaabo yar oo khaldan, tusaale ahaan, Mac waa loo soo gaabiyaa Macintosh, laakiin ma jiro kombiyuutar loo yaqaan 'Macintosh' dambe. A "Mac" waa kombuyuutar, waa isla qalab kaliya kiis dhalaalaya, wuxuuna ku kacayaa 4 jeer ka badan. Waxaan u maleynayaa in farqiga aad isku dayayso inaad muujiso uu yahay in MacOS (yacni, Nidaamka Howlgalka) uu ka wanaagsanyahay Windows adeegsiga ganacsiga, hadana waxaad ku guuldareysatay inaad tilmaamto sababaha dhabta ah ee ay MacOS ugufiican tahay isticmaale ganacsi.
1. AirPlay waxay kaa rabtaa inaad Iibsato qalab dheeri ah, shirkadaha badidoodna ma laha Apple TV-ka dejinta, taas oo macnaheedu yahay haddii aad hesho AirBook ama wax markaa ma awoodi doontid inaad si dhab ah ula wadaagto waxaad ku samaynayso shaashad kasta oo weyn waxaad ka fogaaneysaa TV-gaaga gaarka ah. Inta badan mashruucyaashu sidoo kale waxay ku fashilmaan inay shaashaddaada si fiican u muujiyaan oo ay u dhacaan 1024 × 768 shaashad (ugu fiican, badanaa 800 × 600 in kastoo), tani waxay siinaysaa waayo-aragnimo daawasho xumo, waxayna u eg tahay qof kasta oo la wadaagaya miiskiisa dadka kale - ma aanan la kulan ganacsi kasta oo uu leeyahay Apple TV weli.
Haddii ay tahay inaad wadaagto miiskaaga daaqada, isla mashruucyadu waxay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho 1280, 1440, 1600 ama 1920 dhibaato la'aan - haddaba maxaa isla qalabku ugu guuldareystay inuu tan sameeyo, sababtoo ah waxaad isticmaaleysaa MacOS? Waxaan u maleynayaa in su’aashu lafteedu ka jawaabeyso
2. AirDrop asal ahaan waa isku mid sida otomaatigga loo ogaado ee gudaha Windows ee meesha yaala ilaa daaqadaha 2000. Mashiin kasta oo ka mid ah shabakada wax si guud u wadaagaya wuxuu ka muuqan doonaa aaga "My Network Places", uma baahnid inaad sameyso wax kasta si tan loo helo, way shaqaysaa! Haddii aad rabto inaad wax u dirto qof, kaliya jiido oo ku dhacdo galkaas, laakiin sidoo kale waad baari kartaa faylashooda isla waqtigaas.
Hadday xireen rukhsadda (Maamulayaasha badankood waxay ku joojinayaan tan muuqaalkeeda aasaasiga ah), markaa waxay ku siin karaan oo keliya rukhsad aad ku qorto galka Dukumintiyada Dadweynaha dhowr ilbiriqsi gudahood.
3. Waqtiga Mashiinka wuxuu u eg yahay kala soocida daaqadaha muddada dheer soconaya oo otomaatig ah (ilaa guushii 2000) Laakiin daaqadaha mid ayaa kaliya kaydinaya faylasha nidaamka, haddii aad rabto inaad kaydiso faylashaada shaqsiga ah, waxaad caadi ahaan yeelan doontaa hab aad tan ku sameyso iyadoo lagu adeegsanayo barnaamijka softiweer-ka ee adeeguhu uusan xitaa u baahnayn inuu wax ka ogaado - waa iska dhici doontaa .
Haddii aad rabto inaad sameysid keydinta xogta shakhsiga ah inkasta, markaa way fududahay inaad tan ku sameyso daaqadaha sida ay tahay inaad ku sameyso MacOS, si fudud ugu soo lifaaq wadista mashiinkaaga, ama NAS shabakadaada, wayna la imaan doonaan softiweerka ku habboon si aad keydkaaga u hesho running Sidoo kale waxaa jira boqolaal istiraatiijiyado Cloud Cloud ah oo halkaas ka jira kuwaas oo aad u jaban oo xitaa fudud in la isticmaalo.
4. Caawinta hijrada ee meheraddu waa wakhti lumis, maxaa yeelay “Maamulkaaga” ayaa mashiinka uun sawir ku soo rakibaya, dhammaan faylashaada shaqsiyeed / shaqeedna waa la HELI doonaa meel kale… Waana la heli karaa qofka isticmaala iyadoo aan loo eegin mashiinka aad gasho. Windows waxay isticmaaleysay isticmaaleyaasha wareegaya ilaa daaqadaha 95, oo si otomaatig ah xogta ugu kaydiya shabakadaada. Qalabka noocan oo kale ah sida shandad loo adeegsaday inuu kuu oggolaado inaad faylasha ku xafidato inta udhaxeysa qadka iyo khadadka sidoo kale, taasna waxaa laga heli karaa Windows 95!
May 23, 2013 at 10: 20 AM
Waxay umuuqataa “wiil aan taageere u aheyn” adeegso astaamahan, @ facebook-100000630323259: disqus. 🙂
1. Waxaan idhi waxay u baahan tahay $ 99, laakiin adigu waxaad ka dhigtay ujeedadayda. Maxay ganacsigu kumanaan ugu qarashgareyn karaa borojeero halkii uu si fudud ugu rakibi lahaa HDTV wanaagsan iyo AppleTV? Taasi waa sababta aan ugula talinayo.
2. Maya, waxaan ka baqayaa inay tahay meesha ugu dhow. Looma baahna in rukhsad la dejiyo, isla shabakadda Windows-ka laga ahaado, iwm. AirDrop waxay u oggolaaneysaa wixii Mac ah ee ka agdhow oo ku xiran isla wireless-ka si ay ula wadaagaan faylasha.
3. Mar labaad, haddii aad runti socotid barnaamijka, waxaad arki lahayd farqiga u dhexeeya.
4. Waxaan ka soo shaqeeyay daraasiin meheradood oo kaliya laba ayaa lahaa iswaafajinta saxda ah iyo faylalka shabakadaha ee aad ka hadasho. Mar labaad, tani waxay Macgeygeyga cusub ka dhigeysaa nuqul sax ah, halka qalabka lagu hagaajinayo hoostiisa.
Uma hadlayo sidii nin aan khibrad u lahayn labadoodaba. Waxaan guriga ku haystaa nidaam bahal Windows ah oo wata XBox 360 oo madadaalo leh. Khibradda Windows-ku maahan isku mid. Mac iyo OSX waxay si fudud uga shaqeeyaan si ka dhakhso badan, ka dhakhso badan, ugana fudud Windows. Waxaan ahaa isticmaale Windows muddo toban sano ka badan. Waxaan ka baqayaa inaanan dib u noqon doonin. Saaxiibbaday oo igu caayi jiray inaan ahay "wiil taageere" ayaa isla sidaas ogaaday.